Onweghị etu esi amata nwoke na-eri nwoke ibe ya - Dr Ibeneme - BBC News Ìgbò
Onweghị etu esi amata nwoke na-eri nwoke ibe ya - Dr Ibeneme
28 Ọgọọst 2018
Media captionOnweghi etu esi ama ma nwoke ọ na edina nwoke -Dr Ibeneme
Ndị uweojii na Legọs nwụchịkọrọ ụmụokorobịa nọ na-ebiri ndụ na ọdọ aṅụrị akpọrọ Kelly Ann Hotel/Event Centre dị n'Egbeda, Legọs n'ụtụtụ Sunday.
Aka na-achị uweojii na Legọs bụ Imohimi Edgal gwara ndị ntaakụkọ mgbe ha kpọpụtara ndị a ha ji na ọ bụ ndị ọgbaama suru ndị ahụ imi, nke mere ndi isi uweojii na obodo Shasha na Idimu dị na Legọs jiri wụchie n'ulo nkwarị akụ ahụ n'ime ndeeri.
Akụkọ ga-amasị gị n'ụtụtụ a: Uweojii akaparala umụnwoke ndị ha sị na-eri onwe ha na Legọs
A ga-eme nyocha DNA iji mata ndị ụkọchukwu Katọlik mụụrụ nwa
Edgal sị: "Ka ndi otu anyị ruru ebe ahụ, ha hụrụ okorobịa ruru iri asatọọ nọ ebe ahụ aṅụcharị manya dị iche iche na ọgwụike di n'iwu dịka Tramadol na guf,"
Ọ gakwara n'ihu kwuo na mgbe ụmụ okorobịa ahụ riri mbọmbọ ọsọ mgbe ha hụru ndị uweojii a.
"Anyị nwụdere mmadụ 57 n'ime ha," Edgal gwara ndị ntaakụkọ.
Mana, ụlọ ntaakụkọ Premium Times dere na otu onye n'ime ndi uweojii ji aha ya bụ Wealth Olasunkanmi ha gbara ajụjụ gwara ha na ọ bụ emume nchete ọmụmụ otu onye n'ime ha ka ha bịara n'ọdọ nkwarị ahụ ime ebe ahụ.
"Ha sị na anyi bụ ndị nwoke na-eri nwoke ibe anyị, esoghị m na nke ahụ. Ha si na o bụ emụme ịbanye otu ka anyị na-eme, mana onweghi ihe dị otu ahụ".
Okwu Olasunkanmi dara ka nke ọtụtụ ndị ọzọ aka jikwa kwuru.
Nkenke aha onyonyo Na mpaghara Afrịka dị ka ndịda Afrịka, iwu amachịghị nwoke maọbụ nwaanyị ịnụ onye ọbụla ọchọrọ.
Mana Edgal kwuru na a ga-akpọpụ ndị a ha ji ụlọ ikpe bụ ebe ha na iwu obodo ga-ezute.
Okwu a mere ka anyị jụọ onye ọkachamara n'ihe banyere ahuike bụ Dọkịnta Ginger Ibeneme.
Ibeneme gwara anyị na-onweghị etu esi amata ma mmadụ a bụ nwoke na-eri nwoke maka adịghị ede ya n'ihu.
Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọbụghị na mmadụ na-eme ka nwaanyị bụ na onye ahụ na-eme udiri ihe a ndi uweojii na-ebo ha.
Onye ọzọ BBC Igbo gbara ajụjụ ọnụ bụ Ọkaiwu Uche Aja kwuru na agbanyeghi na uweojii nwere ikike nke ha ji anwụchịkọ ndị kpara arụ maọbụ ndị ha che na ha chọrọ imegide iwu obodo, mana etu esi agba ha n'anwụ tupu ikpe ama ha ezịghị ezi.
Gee ya ntị ebe a:
Media captionOkwu ọkaiwu Aja
Nke mere o jiri kwuo na ndị a nwere ikike ịgba uweojii akwụkwọ na'ulọikpe maka na-emegidere ikike onwe dịrị ha dika ndị Naịjirịa.
Ihe Obi Onicha kwuru maka 'restructuring' dabara -Ezeife
Vidio Ndị mmadụ nwere ohere ị nọ na-ọtụ ọbụla na Naịjirịa - Ọkaiwu Aja
Vidio Onweghi etu esi ama ma nwoke ọ na edina nwoke -Dr Ibeneme
FAAN enyopuola nwoke ahụ rirụ elu ụgbọelụ na Lagos
A na-enyo ndị na-ele ihe onyonyo mmekọ nwoke na nwaanyị n'ịntanetị?